Qalabka cusub ee A15 Bionic ee ku jira iPad mini wuxuu leeyahay awood xadidan | Wararka IPhone
Qalabka cusub ee A15 Bionic ee ku jira ipad mini -ga ayaa ku kooban awoodda
Angel Gonzalez | 18/09/2021 18:00 | iPad
IPad mini wuxuu ka mid ahaa aaladihii la soo bandhigay dhowr maalmood ka hor iyo in ay layaab ku bixiyeen caleema saarka qodobka muhiimka ah. Iyada oo leh naqshad cusub iyo dib -u -habeyn gudaha ah oo leh isla A15 Bionic chip oo iPhone -ka 13. Hase yeeshee, astaamaha ugu horreeya ee soo baxaya ayaa tilmaamaya xawaaraha saacadda processor -ka iPad mini waa la dhimay oo sidaas daraaddeed Waxqabadka ayaa xoogaa ka hooseeya iPhone 13.
iPhone 13 iyo iPad mini waxay wadaagaan A15 Bionic laakiin leh awoodo kala duwan
Soo -saareyaasha sida A15 Bionic waxay ku leeyihiin gudaha waxyaabo kala duwan sida CPU. CPU ayaa mas'uul ka ah tilmaamaha ka shaqaynta barnaamijyada kala duwan, codsiyada iyo adeegyada nidaamka hawlgalka. Xawaaraha tilmaamahaan lagu shaqaynayo waxay oggolaanaysaa in la bixiyo sawir run ah oo ka badan ama ka yar oo ku saabsan waxqabadka iyo awoodda processor -ka. Tusaale ahaan, CPU -ga saacadiisu tahay 3,2 GHz wuxuu soo saari doonaa 3.200 bilyan oo wareeg oo ilbiriqsi ah.
Marka hore calaamado IPad mini 2021 iyo iPhone 13 siidaynta ayaa muujinaya bandhigyo kala duwan oo leh isla A15 Bionic chip. IPad mini -ku wuxuu bixiyaa natiijooyinka 1595 dhibcood oo leh hal udub dhexaad iyo 4540 dhibcood oo leh imtixaanno badan. Marka laga hadlayo iPhone 13, 1730 dhibcood waxaa laga helaa xudunta iyo in badan oo leh dhibco 4660. Taas macnaheedu waa in qiyaas ahaan iPad mini wuxuu u dhexeeyaa 2 ilaa 8% xoogaa ka xoog yar iPhone 13.
IPad mini -ka cusub wuxuu kordhiyaa xusuusta 4 GB
Sababta ugu weyn ee xogtan waxay ku jirtaa xawaaraha saacadda (ama inta jeer) ee A15 Bionic chip sidaan hore uga soo hadalnay. The iPhone 13 wuxuu ku shaqeeyaa 3,2 GHz inta tii iPad mini wuxuu ku kooban yahay 2,9 GHz. Farqigaani wuxuu sabab u noqon karaa hoos u dhaca awoodda processor -ka.
Si kastaba ha ahaatee, Apple waxay ogtahay xaddidaadaha A15 Bionic waxayna sidoo kale ogtahay isticmaalka la siiyo labada iPhone iyo iPad mini. Sidaa darteed, waxaan fahansanahay in isbeddelkan uu ka yimid Cupertino inkasta oo aanan waligeen ogaan doonin sababta tan dabool hoosaad, Waxa cad ayaa ah in adeegsadayaashu aysan ogaan doonin hoos u dhaca waxqabadka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPad » Qalabka cusub ee A15 Bionic ee ku jira ipad mini -ga ayaa ku kooban awoodda
Apple waxay horey u oggolaatay inay kordhiso AppleCare + gudaha Spain, Faransiiska iyo Talyaaniga
Apple waxay daabacdaa socdaal hagitaan leh warka cusub ee iPhone 13